Jumlada GQ-SN Fiirsashada Fiirsashada - Liquid (Alkali la'aan) warshad iyo soosaarayaasha | Gaoqiang
GQ-SN waa nooc ka mid ah xawaaraha la taaban karo ee shubka gobolka. Qaybta ugu weyn ee GQ-SN waa sodium aluminate. Daboolida ayaa badanaa loo isticmaalaa shubka la buufiyay; waxay dardargelin kartaa habka adkaanshaha ee la taaban karo si hufan, waxayna leedahay faa'iidooyinka cufnaanta hoose ee boodhka, adkeysiga hooseeya, xoogga muddada-dheer, iwm.
1 Dardar galinta qallafsanaanta sibidhka si hufan. Waxay ka dhigi kartaa waqtiga dejinta bilowga wax ka yar 5 daqiiqo iyo waqtiga ugu dambeeya ee dejinta oo kayar 10 daqiiqo.
2 Si wax ku ool ah loo kordhiyo xoogga hore, waxna kuma yeelaneyso xoogga muddada-dheer.
3 Adkeysi hooseeya xagga isticmaalka saamiga shamiitada.
4 Wax yar oo fidsan, ayaa hagaajin kara qashinka biyaha.
5 U daciifnimada xasaasiyadda polycarboxylate ee yareeya alaabada ceeriin, isticmaalka biyaha iyo qiyaasta.
Qalabka dhismaha ee sibidhka, gaar ahaan lagula taliyay dhismaha tamarta hore ee xoogga leh, sida madaafiic lagu buufinayo, shubka la buufiyay, shubka lagu shubay, shubka dahaarka daloolka, iwm.
Xogta Farsamada / Guryaha Caadiga ah
Cufnaanta / (g / cm3), 22 ℃
Maaddada chloride / (%)
Waxyaabaha Alkali / (%)
*Waxyaabaha kor ku xusan ee caadiga ahi kama koobna tilmaamaha sheyga.
Qiyaasta: Qiyaasta lagu taliyay waa 6.0-8.0% culeys ahaan walxaha ku xiran. Qiyaasta wax ku oolka ahi waa inay noqotaa oo ku saleysan nooca sibidhka, heerkulka deegaanka, saamiga sibidhka biyaha, heerka darajada, farsamada dhismaha iyo shuruudaha mashruuca. Waxaa lagugula talinayaa inaad tijaabiso waxqabadka adoo isticmaalaya alaabta ceeriin ee goobta taal.
Isticmaalka: Ku rid isku darka walxaha sibidhka ah irbadaha, xawaaraha ayaa lagu darayaa biiyaha. Sibidhka biyaha saamiga waxaa lagula talinayaa 0.33-0.40 hoobiye, 0.38-0.44 la taaban karo, iyo hubinta hoobiye lagu buufiyo ama la taaban karo ma qulqulayo, midab saafi ah.
Xirmo: 200kg / durbaan, 1000kg / IBC ama codsi.
Kaydinta: Waxaa lagu keydiyaa bakhaar qalalan oo hawo leh oo ah 2-35 pack isla markaana la duubay iyada oo aan xirneyn, nolosha shelf waa 90 maalmood. U qalma ka hor isticmaalka haddii uu ka sarreeyo nolosha shelf.
Buug-yarahaan waxaa loogu talagalay oo keliya tixraac laakiin ma sheeganayo inuu dhammaystiran yahay oo aan lahayn wax waajib ah. Fadlan horay u soco si aad u tijaabiso ku habboonaanta.
Hore: GQ-210 Wakiilka Xoog Hore
Xiga: Cellulose Ether HPMC oo loogu talagalay Nadiifinta / La taaban karo / Grout ahaan Wakiil Wakaaladda Biyaha-ilaaliya
Cellulose Ether HPMC oo loogu talagalay Nadiifinta / La taaban karo / Gr ...